पुराना मन्त्रि हटाएर : यी हुने भए ओली सरकारका नयाँ मन्त्रि हेर्नुहोस् ! – Life Nepali
पुराना मन्त्रि हटाएर : यी हुने भए ओली सरकारका नयाँ मन्त्रि हेर्नुहोस् !
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गर्ने तयारी गरेका छन्। केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्ने र उनीहरूको सट्टा नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही मन्त्रीलाई हटाएर सरकारबाहिर रहेका प्रभावशाली नेताहरूलाई मन्त्री पद दिने तयारी थालिएको हो। आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले यो समाचार लेखेका छन् ।
तर उनी यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री भइसकेकाले कुन मन्त्रालय कुन हैसियतमा दिने भन्नेबारे कुनै तय भएको छैन। ‘रावलको हकमा पोर्टफोलियो नमिल्न सक्छ, त्यसकारण उहाँलाई पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउने कि नगराउने भन्ने विषय छलफलमै रहेको छ,’ स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार अग्नि सापकोटा पनि पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा पर्नेछन्।
Previous मुख्यमन्त्री भट्टका स्व’कीय सचिव प्रहरी नि’यन्त्रणमा !
Next विष्णु पौडेललाई पनि मन्त्री बनाउने तयारी !